Vaovao - Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny sokitra laser?
Ny laser dia afaka manao karazana milina maro. Toy ny fitsaboana hafanana ambonin'ny fitaovana, welding, fanapahana, totohondry, sokitra ary micromachining. CNC fanodinana masinina fanodinana laser: zavatra biolojika, lamba, taratasy, hoditra, fingotra, takelaka mavesatra, lovia kely, landihazo, vera, plastika ary fitaovana tsy metaly hafa. Ny teknolojia fametahana laser laser dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro toy ny indostrian'ny mekanika, indostrian'ny elektronika, fiarovam-pirenena ary ny ain'ny olona. Inona avy ireo antony lehibe mahatonga ny masinina sokitra laser laser?
Ireto misy lafiny enina manaraka ireto:
1. Ny fiantraikan'ny herin'ny famoahana sy ny fotoana fampielezana
Ny herin'ny famoahana laser dia lehibe, lava ny fotoana fampielezana, lehibe ny angovo azo avy amin'ilay workpiece. dia, ary ny taper dia kely kokoa.
2. Ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana sy ny zoro divergence
Ny taratra laser misy zoro divergence kely dia afaka mahazo toerana kely kokoa sy hakitroky herinaratra ambony kokoa amin'ny fiaramanidina ifantohana aorian'ny fandalovana ilay solomaso mifantoka miaraka amin'ny halavany fohy fohy. Ny kely kokoa ny savaivony eo amin'ny tampon'ny velarana, ny fineran'ny vokatra azo sokitra.
3. Ny fitaomana ny toerana ifantohana
Ny toerana ifantohana dia misy akony lehibe amin'ny endrika sy ny halalin'ny lavaka noforonin'ny asa voasokitra. Rehefa ambany dia ambany ny toerana ifantohana, ny velaran-jiro manerana ny faritra anaovana dia lehibe dia lehibe, izay tsy vitan'ny hoe mamoaka lakolosy vaventy, fa misy fiantraikany amin'ny halalin'ny masinina noho ny safidin'ny angovo. Raha mitombo ny fifantohana dia mitombo ny halalin'ny lavaka, raha toa ka avo loatra ny fifantohana, dia eo amin'ny faritra misy ny velarana iainana no velarana lehibe sy lehibe eraky ny fikaohon-tany, lalina ny halavan'ny tokana. Noho izany, ny fifantohana dia tokony ahitsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fizotry ny workpiece.
4. Fiantraikan'ny fizarana angovo ao anatin'ny toerana
Ny tanjaky ny andry laser dia miovaova arakaraka ny toerana amin'ny toerana ifantohany. Ny angovo dia zaraina symmetrika amin'ny axe micro an'ny fifantohana, ary ireo lalan-dra vokarin'ny andry dia mitovy symmetrika. Raha tsy izany dia tsy simetrika ireo lava-bato aorian'ny sokitra.
5. Ny fiantraikan'ny isan'ny fambara
Ny halalin'ny masinina dia in-dimy eo ho eo ny sakan'ny lalamby, ary lehibe kokoa ny taper.Raha im-betsaka ny laser no ampiasaina, tsy ny halaliny ihany no azo ampitomboina bebe kokoa, ny taper azo ahena, ary ny sakany saika mitovy. .
6. Fanan-kery amin'ny fitaovan'ny workpiece
Noho ny fahitana fahitana samihafa momba ny angovo avy amina fitaovana enti-miasa isan-karazany dia tsy azo atao ny mitroka ireo angovo laser voangona ao amin'ilay workpiece amin'ny alàlan'ny solomaso, ary ampahany lehibe amin'ny angovo no hita taratra na vinavinaina ary miparitaka. Ny tahan'ny fifoka dia mifandraika amin'ny fampisehoana fampidirana ireo fitaovana workpiece sy ny halavan'ny laser.